काे हुन् बलात्कारी बाबा ? जसलाई १० वर्ष जेल सजाय सुनाइयाे
भारत, १३ भदौ । अदालतबाट बलात्कार अभियोग प्रमाणित भएका भारतीय धर्मगुरु गुरमित राम रहिमलाई अदालतले १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । हरियाणा राज्यको रोहतक शहरमा रहेको जेलमै भारतीय अनुसन्धान निकाय सीबीआईको ...
मङ्लबार, भदौ १३, २०७४ 84
भेनेजुएलामा विशाल सैन्य प्रशिक्षण
भेनेजुएला, १२ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैनिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि भेनेजुएलामा विशाल सैन्य प्रशिक्षण सुरु भएको छ । सरकारी टेलिभिजनमा जारी सूचनामा अमेरिकाले गर्नसक्ने सैनिक आक...
सोमवार, भदौ १२, २०७४ 86
अमेरिकाको टेक्सासमा भीषण समुद्री आँधी
न्यूयोर्क, ११ भदौ । अमेरिकाको टेक्सासमा आएको समुद्री आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । आधीका कारण २ लाख ३० हजार बढी प्रभावित भएको रोयटर्सले जनाएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय आँधी केन्द्रले तुफानका कार...
आइतवार, भदौ ११, २०७४ 222
बलात्कारी बाबालाई भगाउन खतरनाक मास्टरप्लान !
भारत, ११ भदौ । (एजेन्सी)– भारतमा बलात्कारको अभियोगमा दोषी भएका बाबा राम रहीमलाई अदालतबाटै भगाउन खतरनाक योजना बनेको खुलासा भएको छ । बाबा गुरमित राम रहीमलाई अदालतबाटै भगाउनको लागि उनका हतियारधारी कमाण्ड...
आइतवार, भदौ ११, २०७४ 170
अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउने ट्रम्पको घोषणा
एजेन्सी, ६ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफ्गानिस्तानमा आतङ्कबाद विरुद्धको कारबाहीका लागी अमेरिकी सेना थप गर्ने बताएका छन् । अफ्गानिस्तानमा सक्रिय आतङ्ककारि लडाकुहरुलाई परास्त पार्न अमे...
मङ्लबार, भदौ ६, २०७४ 82
अमेरिका, ५ भदौ । अमेरिकी जलसेनाले उसको एउटा पानीजहाज अर्को व्यापारिक पानीजहाजसँग सिंगापुरको समुद्री क्षेत्रमा ठोक्किएको भन्दै खोज तथा उद्दार कार्य अघि बढिरहेको बताएको छ। क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने क्षम...
सोमवार, भदौ ५, २०७४ 214
युपीमा रेल दुर्घटना, २३ जनाको मृत्यु
एजेन्सी, ४ भदौ । भारतको उत्तरप्रदेश राज्यस्थित मुजपm्फरनगर जिल्लामा रेल दुर्घटना हुदा २३ जनाको ज्यान गएको छ । उरिसा राज्यको पुरिदेखि उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्वार तर्फ गइरहेको रेल मुजफ्फरनगरस...
आइतवार, भदौ ४, २०७४ 206
ट्रम्पद्वारा रणनीतिक सल्लाहकार बर्खास्त
एजेन्सी, ३ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकार स्टिभ बानोनलाई बर्खास्त गरेका छन् । ह्वाईट हाउसकी प्रवक्ता सारा ह्युकबी स्याण्डर्सले एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ...
शनिबार, भदौ ३, २०७४ 158
बार्सिलोनामा इस्लामिक स्टेटको आक्रमण, १३ जना मारिए
स्पेन, २ भदौ । स्पेनको स्वशासित क्षेत्र क्याटालोनियाको राजधानी बार्सिलोनामा भएको आतंकवादी आक्रमण १३ जना मारिएका छन् । बार्सिलोनाको पयटकीय स्थल लास राम्ब्लासमा पैदलयात्री माथी कारले आक्रमण गर्दा १३ जना...
शुक्रबार, भदौ २, २०७४ 137
फिलिपिन्समा ३२ जना लागुऔषध तस्कर मारिए
एजेन्सी, १ भदौ । फिलिपिन्स प्रहरीको लागुऔषध बिरुद्धको कार्वाहीमा बुलाकन प्रान्तमा ३२ जना संदीग्ध लागू औषध तस्करहरु मारिएका छन् । राजधानी मनिलादेखि ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने बुलाकन प्रान्तमा प्रहरीको ६...
बिहिबार, भदौ १, २०७४ 373
अस्पतालमा अक्सिजन नहुँदा भारतमा ६३ बालबालिकाको मृत्यु
एजेन्सी, २९ साउन । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन सेवा अबरुद्ध हुदा मृत्यु हुने बालबालिकाको सङख्या ६३ नाघेको छ । उत्तर प्रदेशस्थित गोरखपुर जिल्लामा रहेको बाबा राघब दास अस्पतालमा ...
आइतवार, साउन २९, २०७४ 27
अमेरिकाले भेनेजुयलामाथि नाकाबन्दी लगायो
एजेन्सी, २६ साउन । भेनेजुयलामा बिगत ४ महिनादेखी जारी आन्दोलनकारीका जायज माग सम्बोधन नगरी संबिधान सभाको चुनाब गरेको भन्दै अमेरिकाले भेनेजुयलाका सरकारी अधिकारीहरुमाथी नाकाबन्दी लगाएको छ । राष्ट्रपति ...
बिहिबार, साउन २६, २०७४ 173